Tilmaamayaasha Flat ee Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Astaamaha xulashooyinka ikhtiyaariga ah: tilmaamayaasha fidsan
Faa'iidada ugu badan ayaa la siiyaa iyadoo laga ganacsanayo isbeddellada, cidina kuma doodi karto tan. Laakiin haddii aad eegto taariikhda sida calaamadaha u u shaqeeyaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , waxaad arki kartaa in 70% waqtiga suuqa ee dhinacyada kala duwan. Tilmaamayaasha fidsan ayaa kaa caawin doona inaad si sax ah u aqoonsato xilliyada isbedbeddelka hooseeya, galaan bilowga hore ee dhaqdhaqaaqa jihada.
Dhammaan hantida ganacsi waxay leeyihiin xilliyo markii sicirku u dhow yahay aan la beddelin, taas oo macnaheedu yahay xisaab la'aanta ama "ku-meel-gaadh" ku meel gaadh ah oo u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha. Intaa waxaa sii dheer, guryuhu wuxuu noqon karaa mid ballaaran oo leh dhaqdhaqaaqyo fiiqan oo fiiqan oo ah 50-100 dhibcood, oo aan lagu xaqiijinin xaddiga ganacsiga. Dhaqdhaqaaqa Dhinacyadu wuxuu bilaabmaa marka isbeddelku dhammaado, kahor ama kadib dhacdooyinka aasaasiga ah ee xoogga leh.
Tilmaamaha fidsan ayaa suurtagal ka dhigaya in horay loogu sii diyaariyo furitaanka ganacsi ka dib kala-goyn kala duwan, markii isbeddelku bilaabmayo inuu lumiyo xooggiisa ama uu xiro booska hadda. Markaad falanqeynayso dhaqdhaqaaqa qiimaha, waa inaad xusuusataa:
Haddii uu jiro dhaqdhaqaaq dhinac ah oo ku saabsan jadwalka waqtiga dhexe iyo kan sare, fiiri xilliyada gaagaaban. Waxaa jiri kara aagagga isbeddelka oo ay suurtagal tahay in la furo ganacsi kacsan.
Istaraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa in lagu ogaadaa jiritaanka dhinac dhinac ah oo isla saxsan iyadoo aan loo eegin waqtiga iyo labka lacag;
Wanaagsan tahay marka tilmaame fiduhu leeyahay dejimaha iskucelceliska isbeddelka. Tusaale ahaan, lammaanaha ay ka mid yihiin GBP, caadadu waa ballaca marinka 50-70 dhibcood, iyo isbeddelka hooseeya ee NZD, dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah horayba waa isbeddel xooggan.
Qalabka caadiga ah ee guryaha lagu ogaado
Shaqadayada ayaa ah inaan go'aamino maqnaanshaha dhaqdhaqaaqa dhawaaqa. Waa wax caqli gal ah in loo qaato in marka hore tan lagu tusi doono tilmaame fidsan oo raacaya jihada suuqa - celceliska dhaqaaqa (Celceliska Dhaqdhaqaaqa) iyo iskudhafyadooda. Mid ka mid ah xulashooyinka ugu fudud ee laga heli karo dhammaan meheradaha ganacsiga waa bin Williams «Alligator».
Khadadka ayaa isku dhafan ama loo qaabeeyey si isku mid ah; bilaabaan inay ku kala weecdaan bilowga isbeddel cusub.
Tilmaamaha soo socda ee fidsan waa Bollinger Bands, halkaas oo, marka lagu daro jihada, isbeddelka hadda jira la qiimeeyo. Cidhiidhiga kanaalka, ayaa sii xoogeysan doona isbeddelka soo socda, iyo 50-60 dhibcood oo ballac ah, isticmaal istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, gaar ahaan waqtiyada sare.
By dabiiciga ah ee dhaqdhaqaaqa qiimaha qaraabo inay khadadka tilmaanta, mid ka mid ah qiyaaso xoogga hadda dibi ama orso karo. Markay sii dheeraato jaantusku “wuxuu ku faafaa” xadka Bollinger, ayay sii kordheysaa isbeddelku .
Xuduudaha marinka qiimaha wuxuu noqon doonaa heerar iska caabin / taageero xoog leh, ganacsiyo ka furan gudaha dhexdiisa iyadoo la adeegsanayo tilmaame kanaalka Keltner oo ah nooc kale oo ah «baqshadda celceliska»:
Fursadaha binary Open kaliya marka taqalustay ka soohdinta Keltner Channel!
Parabolic SAR waxaa loo isticmaali karaa tilmaame fidsan, kaas oo sidoo kale adeegsada Celceliska Dhaqdhaqaaqa oo leh tilmaam ku habboon. Mabda 'aasaasiga ah ayaa weli ah - marba marka ka dambaysa ee ay calaamaduhu is ag yaalliin, sida ugu dhakhsaha badan bilowga sicirka sicirka ee kala-soocidda xadka kala duwan.
On wakhti hoose, dhishka SAR si adag u Hadhi karo, oo muujinaysa bilowgii arrimuhu marka ay ku dhawaad in ka badan. Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho kaliya qayb ka mid ah istiraatiijiyad dhammaystiran oo loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah.
Oscillator-ka oo ah tilmaame fidsan ayaa muujinaya kaliya isbeddelka guud ee aan lahayn macluumaad ku saabsan jihada loo jabin doono baaxadda. Khasaaraha ka mid ah - helitaanka daqiiqada ka bixitaanka dhaqdhaqaaqa dhinaca gadaal ayaa loo dhigay, hase yeeshe, sidoo kale falanqaynta farsamo oo dhan.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa si loo xaqiijiyo tilmaamayaasha isbeddelka. Markuu jiro flat, khadadka calaamadaha kama dhaafayaan khadka dhexe ee u dhexeeya aagagga xad dhaafka ah iyo kuwa la iibsaday. Haddii ay ku dhow yihiin celceliska ama heerka eber mustaqbalka dhow, suuqa wuxuu sii wadi doonaa «hurdo». Stochastic Oscillator, Tusmada Awoodda Qaraabada (RSI), Williams% R iyo wax ka beddelladooda ayaa si fiican isu caddeeyay:
Xitaa on wakhti daqiiqadii, Stochastic iyo RSI dhif galaa aag xad dhaaf ah, iyo aad ka maqnaan karaa wax badan oo binary top fursadaha calaamadaha wanaagsan. Haddii qiimaha iyo oscillators ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
Si aad khibrad u hesho, u gudub aaladaha xirfadlaha ah, sida Accelerator Oscillator (AC) ama ADX, taas oo yaraynaysa dib u dhaca sababo la xidhiidha algorithm adag, hagaajinta calaamadaha ganacsiga ee ganacsiga.
Muga ganacsiga sida tilmaame guri
Ganacsaduhu badanaa wuxuu arkaa oo keliya tirada macaamil ganacsi halkii unug ee waqtiga ama mugga shilinta, in kasta oo ay taasi jirto, waxay noqon doontaa qodobka saddexaad ee xaqiijinaya. Heerarka caadiga ah, Qiyaasta isu-dheellitirka, ama Cabsida Oscillator waa inay muujiyaan mugyo yaryar - haddii suuqa dibedda ka deggan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa uusan hoos u dhicin, markaa isbeddel cusub ayaa durba dhow.
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa kalandarka dhaqaale ee lagu soo daray dhammaan goobaha ganacsiga ee caanka ah!
Hadda aan aragno sida seddexda qalabba ay u xaqiijinayaan calaamadaha midba midka kale:
Sidaad awoodid, barta laga soo galo waa mid la isku halleyn karo, xitaa kuwa bilowga ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ka heli kara
Codka jamhuuriyadda soomaaliya Tilmaamayaasha fidsan ee TradingView
Qalabka laba-geesoodka ah ee 'vfxAlert' wuxuu ka kooban yahay jaantusyada qiimaha adeegga TradingView iyo noocyo tilmaamayaal farsamo ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin sidoo kale aalado lagu ogaanayo guriga:
Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay laba sadar oo muujinaya jihada iyo xoogga isbeddelka. Markii hore, xariiqa kor u kaca (VI +) waa buluug, hoos u dhaca (VI-) waa midab buluug ah. Khadadka kore wuxuu muujinayaa isbeddellada hadda ka socda suuqa. Billowga gurigu wuxuu noqon doonaa isku xirnaanta khadadka sida "Alligator" oo ay ku xigi doonto dhaqdhaqaaq siman.
Bollinger Bands ayaa la adeegsadaa: joogitaanka guryuhu waxaa lagu go'aamiyaa inta jeer ee laga talaabayo xariiqdiisa dhexe: histogaraamku waa casaan hoose ilaa ka sare, huruudna kor ilaa hoos. Burburka beenta waxaa lagu muujiyey cagaar iyo casaan. Markii isbeddel cusubi bilaabmay, histogaraamku inta badan waa buluug.
Qiimaha Tilmaamay Oscillator (DPO)
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya qalabkan iyo inta badan oscillators-ka kale ayaa ah awooda iska indha tirka saamaynta isbeddellada muddada-dheer. Ka takhalusida saameynta jihada waxay si weyn u fududeyneysaa geeddi-socodka falanqaynta wareegyada gaagaaban, taas oo iyaduna gacan ka geysaneysa in la garto qodobbada tilmaamidda ee muhiimka u ah horumarinta isbeddellada dhaadheer.
Guri dabaq ah waa dhaqdhaqaaqa jiifka ah ee DPO oo u dhow heerka eber. Sida dhammaan oscillators, calaamaddu waxay u baahan tahay xaqiijin dheeri ah oo ku saabsan calaamadaha ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Tilmaamayaasha fidsan ee boosteejada ganacsiga
Had iyo jeer xusuusnow isku darka «tusaha isbeddelka + oscillators + mugga ganacsiga». Had iyo jeer waa la isticmaalaa: kala duwanaanshaha ayaa kaliya ku jira tirada goobaha, siyaabaha lagu muujiyo bilowga / dhammaadka isbeddelka, ku habboonaanta jadwalka gaarka ah iyo lammaanaha lacagta. Hubso inay ka fiican yihiin sida caadiga ah ee loo yaqaan 'RSI' ama Keltner Channel, ka dibna kaliya ku sharad akoon dhab ah. Xulashooyinka badan, ka fiirso seddex muujisay natiijooyin xasilloon 2-3-dii sano ee la soo dhaafay:
Tilmaamayaasha kuma jiraan qeybta aasaasiga ah ee goobaha ganacsiga ugu badan; si fudud oo xor ah ayaa loogala soo bixi karaa internetka.
Marka lagu daro daqiiqadda bilowga / dhammaadka dhaqdhaqaaqa dhinaca, waxay muujineysaa jihada suurtagalka ah ee isbeddelka mustaqbalka. Dibedda, waxay umuuqataa aaladda 'MACD histogram' oo leh calaamado binary ganacsi oo cusub:
Dhibco cagaaran iyo jaalle ah ayaa muujinaya, siday u kala horreeyaan, marka gurigu bilaabmo / dhammaado;
Midabka casaanka ee histogaraamku wuxuu muujinayaa qiimo dhaca, buluug - koror. Midabada madow waxay muujinayaan saxitaanka suurtagalka ah, laakiin saxnaanta calaamaddan ayaa hooseysa.
U fiirso taxanaha saxda ah 40-60 dhibco ballaaran, laakiin xitaa tani maahan isbeddel. Qiimaha ayaa ugu dambeyntii jabiyay xadka hoose, sida uu saadaaliyay Pulse Flat .
Sharaxaadda ayaa sheegaysa in algorithm-ku uu ku saleysan yahay «taxanaha waqtiga maaliyadeed ee ka soo horjeeda aragtida Chaos». Qorayaashu laftoodu ma garanayaan waxa taxanaha waqtiga loola jeedo, laakiin iVAR si kalsooni leh ayey u shaqaysaa.
Dhibaatada oscillators-ka kor lagu sharaxay ayaa si cad u muuqata: dhaqdhaqaaq dhinac ah ayaa la go'aamiyaa iyada oo aan la helin macluumaad ku saabsan goorta uu dhammaan doono iyo halka ay u badan tahay in qiimaha uu aado. Tani waxay ka dhigan tahay in tilmaamaha fidsan uusan ku jirin aaladaha isbeddelka, waxaad u baahan tahay inaad adigu ku darto.
Xusuusnow in shumaca xiga uu ku jabi karo dhaqdhaqaaqa dhinaca; marna macquul maahan in si sax ah loo qiimeeyo wadada suuqa u mari doono. Haddii ay jiraan boosas furan, hubso in xisaabinta dhicitaanku ay sax tahay. Scalpers waxaa lagula talinayaa inay furaan xulashooyin kala duwan oo taabashada ah si ay uga shaqeeyaan xawaaraha sicirka marka tilmaan bixiyaha fidsan uu siinayo calaamado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u ah jabitaanka .
Filter Taxanaha ah
Xulashada ka soo horjeedda ayaa ah tii hore: xogta celceliska dhaqdhaqaaqa iyo jabka ayaa lagu soo bandhigaa daaqad gooni ah, si aysan u jahwareerin shaxda qiimaha. Calaamaduhu uma baahna sharraxaad dheeri ah.
Dareen xoog leh oo hoos u socda ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay sii deynta warar aasaasi ah oo xoog leh ama jabitaan heer iska caabin ah oo xoog leh. Filter Trend ayaa iska indhatiray dhacdada muddada-gaaban, isagoo sii wadaya inuu si sax ah u muujiyo isbeddellada hadda socda.
Way fiicantahay dadka bilowga ah inay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqa dhinacyada, marka waad badbaadin doontaa neerfahaaga mana waayi doontid deebaajigaaga. Xitaa haddii aad ku guuleysatay inaad lacag sameyso adoo ka soo kabanaya soohdimaha kanaalka, kani maahan istiraatiijiyaddaada weli. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay ugu shaqeeyaan xilliyada isbeddellada.